Vaovao - Fitaovana masinina electromagnetic masinina manafina ny toetra mampiavaka azy sy ny fitsipiky ny miasa
Ny toetra mampiavaka azy sy ny fitsipiky ny fiasan'ny masinina elektromagnetika an'ny kojakoja masinina sarontava. Ny clutch electromagnetic dia fitaovana famokarana ilaina amin'ny masinina sarontava. Ny fametahana elektrômanetika tsara dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny masinina misaron-tava ary mamonjy ny vidin'ny mpiasa sy ny volan'ny orinasa. Raha te-hisafidy clutch elektromagnetika iray tsara ianao dia tsy maintsy fantatsika ny toetrany sy ny fitsipiky ny asany.
Fitaovana masinina electromagnetic masinina manafina ny toetra mampiavaka azy
Rehefa velomina ny onja dia mipoitra hery mahery vaika ary avy eo dia tafiditra ao ny takelaka "armature". Ny clutch dia ao amin'ny fanjakana mirotsaka. Rehefa tapaka ny riaka dia tsy manome hery ny coil ary misokatra ny "armature", ary ao anaty fanjakana misintona no misy ny kopina.
1. Fivoriambe mora fikojakojana sy fikolokoloana: an'ny endrika static an'ny coil field magnetika tafiditra ao anaty baolina izy, ka tsy ilaina ny mamoaka ny afovoany afovoany na mampiasa borosy karbonika, ary mora ampiasaina izy io.
2. Valiny haingam-pandeha: Satria karazany maina io dia ampitaina haingana ny torela ary azo atao ny manao hetsika mety.
3, faharetana matanjaka: fanaparitahana hafanana tsara, ary fampiasana fitaovana mandroso, na dia ho an'ny fahita matetika sy fampiasana angovo avo lenta aza dia mateza be.
4, ny hetsika dia marina tokoa: ny fampiasana loharano miendrika lovia, na dia misy hovitrovitra mafy aza dia tsy hamokatra maharitra, faharetana tsara.
Ny fitsipiky ny fiasan'ny herinaratra elektromagnetika an'ny masinina saron-tava: ny ampahany mavitrika sy ny ampahany entin'ny fatotra elektromagnetika dia mampiasa ny disadisa eo amin'ny sehatry ny fifandraisana, na mampiasa ranon-javatra toy ny fampitaovana fampitaovana (fametahana hydraulic), na mampiasa fampitana andriamby (clutch electromagnetic ) mamindra Ny tselatra mamela ny roa hisaraka misaraka vetivety, ary afaka hirotsaka tsikelikely, ary ny faritra roa dia mihodina ho setrin'ny tsirairay mandritra ny fandefasana.
Ny fitsipiky ny fiasan'ny herinaratra elektromagnetika an'ny kojakoja masinina sarontava
Fanadihadiana ny fitsipiky ny fiasan'ny herinaratra elektromagnetika an'ny kojakoja masinina saron-tava: ny faran'ny tsorakazo amin'ny zana-kazo mitondra fiara dia misy takelaka fikorontanana mihetsika, izay afaka mihetsika malalaka amin'ny làlan'ny axial. Noho ny fifandraisan'ny tsipika, dia hihodina miaraka amin'ny hazo familiana izy io. Ny takelaka fikorontanana ary ny takelaka fikorontanana mitondra fiara dia mifandimby mifatotra, ary ny ampahany amin'ny sisin'ny sisiny ivelany dia mihidy ao anaty sandriny namboarina niaraka tamin'ny fitaovana nitaingina azy, ka ny takelaka fikororahana entina dia afaka manaraka ny fitaovana entina ary tsy afaka mihodina izy rehefa mihodina ny hazo mpitondra fiara. .
Rehefa velom-bolo ny coil dia voasarika amin'ny vy ny takelaka fikorontanana, ary manintona ihany koa ny armature, ary voafintina mafy ny takelaka fikirakirana tsirairay. Miankina amin'ny disadisa misy eo amin'ny takelaka fikorontanana sy ny lozisialy, ny rotaka entina dia mihodina miaraka amin'ny vatan'ny mpamily. Rehefa maty ny coil, ny loharano coil napetraka eo anelanelan'ny takelaka fikorontanana anatiny sy ivelany dia mamerina ny haingon-trano sy ny takelaka fikororohana, ary ny fihazonana dia mamery ny vokan'ny famindrana torela. Ny faran'ny coil dia mampiditra ny herin'ny DC amin'ny alàlan'ny borosy sy peratra slip, ary ny tendrony hafa kosa dia azo alefa.